Izixhobo zePdr, i-Pdr Kit, izixhobo zePdr zeMoto, izixhobo zePdr zeZixhobo-KULUNGILE
IZIXHOBO ZOKUSEBENZA ZISoloko zibambelela kumgaqo wexabiso, umgangatho, inkonzo kunye nokunyaniseka kuqala. Enkosi ngentembeko nenkxaso yakho. Siza kukhonza wonke umntu ngokunyaniseka, ukunyaniseka, ukunyaniseka kunye nehlombe.
UKWENZIWA KOMSEBENZI WOBUCHULE
IMINYAKA ELI-10 YAMAXABISO OKUTHUNYELWA KWAMANYE AMAZWE NGAPHANDLE
Amava eR & D NAMAQELA ATHENGISAYO
INKONZO YOKWENZIWA KWENKQUBO
Izixhobo zaseShanghai Kungcono nje Co., Ltd yasekwa ngo-2010 kwaye yaphangwa ngo-NO. 328 YangYue, iYangWang Industral Park, isithili saseFengXian, eShanghai, China. Izixhobo ezingcono nje zidibene nophuhliso, ukuvelisa, iSebe lokuthengisa, Sichonga uluhlu olupheleleyo lwezixhobo zeDent, izixhobo ezizenzekelayo kunye neemveliso ezinxulumene noko. Iimveliso zethu kumazwe angaphandle ukuba ngokupheleleyo kwikona nganye yehlabathi.
50PCS Professional Hook Intonga Kit
Isixhobo sokulungisa imizimba ye-PDR isixhobo seProfessional Push Hook Rods umnyango wokulungiselela isixhobo sokungazilungisi. Yenziwe ngentsimbi ekumgangatho ophezulu insimbi okanye intsimbi yentsimbi, yomelele ngokwaneleyo ukuba inyuse ingqondo ngaphandle kokugoba okanye ukophula.
Ukusebenza kwezixhobo ze-PDR kulula kakhulu, ngokusisiseko wonke umntu unokusebenza. Kukunceda ugcine ixesha, umgudu kunye nemali. Kwaye akukho monakalo kwipeyinti nasemzimbeni.
Izixhobo zobungcali ze-PDR Cwangcisa i-8pcs ye-Push Hook Rods ...
8 PCS PDR Intonga Setha
White Bridge Dent sokutsala Kit For Car Dent Repai ...
Isixhobo sokulungisa imoto ibhulorho yezixhobo zokulungisa amazinyo Pullin ...
I-4pcs i-HSS Cobalt Spot Weld Drill iseti
Isixhobo sokuSusa isixhobo seWiper
I-8pcs Wiper Ingalo yokuSuswa kweNgalo